Mutungamiri weSudan Anokonzera Gakava Pakati peAU neMalawi
Chikumi 08, 2012
Gakava pakati pehurumende yeMalawi neAfrican Union pamusoro penyaya yemutungamiri weSudan, vaOmar al-Bashir, kwapa kuti AU ibvise musangano wayo wanga uchifanirwa kuitirwa kuMalawi mwedzi unotevera.
Musangano uyu wava kuzoitirwa kuEthiopia. Malawi yaramba yakatsika madziro ichiti ichasunga va al-Bashir kana vakauya kumusangano uyu sezvo vachitsvagwa nedare reInternational Criminal Court nemhosva dzavanonzi vakapara mumhirizhonga yemudunhu re Dafur.
Asi African Union yanga ichiti Malawi hayifanirwi kusunga va al-Bashir sezvo vachiuya kumusangano wayo uyo unofanirwa kupindwa nevatungamiri venyika dzese dzemuAfrica kutanga nemusi wa 9 kusvika musi wa 16 Chikunguru.
Mutevedzeri wemutungamiri weMalawi, vaKhumbo Kachali, vaudza vatori venhau nhasi kuti dare remakurukota raudza AU kuti kana isingadi kuti va al-Bashir vasungwe, musangano uyu ngauitirwe kune imwe nyika.
Gore rapera, vaimbove mutungamiri weMalawi, muchakabvu Binga wa Mutharika, vakabvumidza va al-Bashir kupinda munyika iyi. Tatadza kubata ve Au kuti tinzwe divi ravo.
Asi kubva pavakatora chigaro chekuva mutungamiri weMalawi, amai Joyce Banda, vashandura zvakawanda zvakanga zvichiitwa nava Mutharika.
Nyanzvi dzematongero enyika muZimbabwe dzagamuchira nyaya iyi zvakasiyana siyana. Kunyange varipo vari kufarira zvaitwa neMalawi, varipowo vari kuishora zvikuru.
Vari kufarira danho iri vanoti South Africa inofanirwa kutevedzera mutongo weGauteng High Court wekuti isunge vese vekuZimbabwe vanofungidzirwa kuti vari kutyora kodzero dzevanhu kana vapinda munyika iyoyo.
Nyanzvi inoongorora zvematongero enyika yakazvimirira yoga, uye vachidzidzisa zvidzidzo zve Global and African politics pa University of Huddersfiled mu Britain, vaNkululeko Sibanda, vanoti semaonero avo, Malawi iri kukanganisa, nekuti inhengo inofanirwa kutevedza zvinodiwa ne African Union.